Quark Ukukhuthaza ukuHanjiswa kweSisombululo esiHlangeneyo kwiShishini lakho lokuShicilela iimfuno | Martech Zone
I-Quark isungule usetyenziso lwewebhu oluhlanganisiweyo olubandakanya iitemplate zobungcali kunye nesoftware entsha yedesktop, Ukunyusa iQuark. Yimodeli entle enomdla… khuphela usetyenziso olusekwe kwiWindows kwaye ungaqala ukuhlela kunye nokulayisha izinto zakho zentengiso.
Nje ukuba izinto zakho zilayishwe, ungaziprinta kwaye uzisasaze ekuhlaleni ngothungelwano lwabapapashi. Inkonzo ikuvumela ukuba uyile amakhadi okuqeshwa, iincwadana ezinemifanekiso, amakhadi oshishino, amakhuphoni, amaphepha edatha, iimvulophu, iiflaya, iileta kunye neeposikhadi kwiitemplate eziphucukileyo. Ziliqela iitemplate zobungcali kwisiza esele sikhona - ukusuka kwiAccounting ukuya kwiinkonzo zonyango lwezilwanyana.
UQuark uyivulile inkonzo ukuba abashicileli abazimeleyo njengo Ukuzibandakanya kunye nabaqulunqi abaziingcali. Kwishishini elithi "Zenzele ngokwakho" amancinci ukuya kwishishini eliphakathi, esi sisisombululo esinokugcina umbutho ixesha elininzi, umgudu kunye nemali.
Khange ndiyivavanye inkonzo (ivela kuphela kwiWindows-esekwe), kodwa ndinganomdla ekuveni kwabo bazamile. Iinjini zokwenza ngokwezifiso kwi-intanethi kunye nabahleli endibasebenzisileyo ukushicilela izinto bekunzima kakhulu ukuzisebenzisa… le ndlela ye-hybride inokuba sisisombululo esikhulu kude kufike izisombululo ezikwi-Intanethi.
Uyilo lokudibanisa abantu kunye ne-99designs
Nov 27, 2009 ngo-9:21 PM
ingaba kukho isilingo sasimahla esinokusisebenzisa?